Tanàna Ségou: Torohevitra mandritra ny andro avy orana · Global Voices teny Malagasy
Tanàna Ségou: Torohevitra mandritra ny andro avy orana
Voadika ny 15 Jolay 2011 3:14 GMT
Mitohy ny dia ho an'i Boukary Konaté sy ny tariny ao amin'ny tetikasa vatsian'i Rising Voices, Ségou Villages Connection. Iray amin'ireo zava-bitany farany ny famoronana ny foiben'onjam-peo tao an-tanàna tamin'ny alalan'ny “lecteur” mp3 sy “carte mémoire”. Boukary ao amin'ny blaogin'ny tetikasa “Ity misy teknolojia izay ahafahan'ny mponina mihaino amin'ny FM ny mozika henoin'ny mpiray vodirindrina aminy amin'ny alalan'ny ‘carte mémoire’.”
Foiben'onjam-peo tsotra dia tsotra
Ary manohy milazalaza ny fomba fiasan'ilay onjam-peo izy:
Ataonay anatina MP3 ny “carte mémoire” misy hira maromaro dia fantenanay ireo hira ao amin'ilay “carte” no sady mitady ny “fréquence”-n'ny onjam-peo ihany izahay. Rehefa azo tsara amin'ny onjam-peo ilay hira ao amin'ny “carte” dia afaka mihaino hira mitoby ireo mpiray vodirindrina na dia misy elanelana aza eo amin'ny radio, na ny kely aza.
Indrisy anefa, noho ny tsy fahampian'ny herinaratra any an-tanàna, samy alefa amin'ny “batterie” ilay “lecteur” mp3 sy ilay radio, nefa fahombiazana tokony hasiam-pivoarana sy haparitaka amin'ireo tanàna Maliana hafa ity. Izany no nitarika an'i Boukary hametraka ity fanontaniana [fr] manaraka ity:
Raha mahazo tombony betsaka avy amin'ny “carte mémoire” ny kasety amin'ny lafiny mozika, tsy hahazo tombony amin'ny mp3 koa ve ny radio any amin'ny faritra ambanivohitra amin'ny lafiny vaovao sy mozika?
Na izany aza, tokony hitandrina ihany rehefa momba ny fitaovana ara-teknolojia, indrindra rehefa amin'ny tontolo somary mahery setra. Ny tanjon'ny Segou Villages Connection dia tsy voafetra amin'ny fanapariaham-baovao sy fampianarana ny fampiasàna ny teknolojia vaovao, fa koa fampahatsiarovan-tena ho an'ny mponina ambanivohitra. “Ka rehefa avy ny orana dia vonoy ny findainao,” hoy Oumar Dembélé manoro hevitra, mpitoraka blaogin'ny Ségouinfos ao an-tanànan'i Zambougou, izay mitantara loza iray niseho tao an-tanànan'i Bla, raha nanoratra tao amin'ny blaogin'ny Segou Infos [fr] :
Oumar Dembélé, solotenan'ny Ségouinfos any Zambougou
Tamin'ny Sabotsy 19 Jona, maty nilatsahan'ny varatra ny mpiambina ny lisean'i Bla. Olona valo ry zareo no tao anaty tranokely teny an-tsaha. Nilalao ny findainy io mpiambina io, ka tampoka teo dia nilatsahan'ny varatra ireo olona valo tao anatin'ilay tranokely. Roa no maty teo noho eoTwo, ny iray tamin'ireo dia ilay mpiambina, izay namako rahateo ihany koa. Ireo hafa naratra kosa dia nentina tany amin'ny tobim-pitsaboan'i Bla.
Nanoratra momba ny loza hafa tao amin'ny tanànan'i Dotebougou ihany koa i Oumar, ka nanome torohevitra fanampiny ho an'ireo mpamaky azy:
Ny Talata 31 Mey tamin'ny andro avy orana, nianjeran'ny hazo baobab ny ramatoa iray sy ny zanany tany Dotebougou. Tsy nisy avotra na ilay vehivavy na ny zanany. Miantso ny rehetra aho mba tsy hipetraka ambodihazo rehefa mivatravatra ny orana.
Sarin'ilay hazo Baobab nalain'i Oumar Dembélé